सडकका साथी भेट्दा स्टेजमै रोए अशोक, दमकमा अशोक दर्जी र टंक बुढाथोकीको तहल्का ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
February 2, 2021 AdminLeaveaComment on सडकका साथी भेट्दा स्टेजमै रोए अशोक, दमकमा अशोक दर्जी र टंक बुढाथोकीको तहल्का ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आँखा रसाउने किसिमको बातावरण सिर्जना भएको छ । अशोकले आफू रुदै गित गाउदा सबैका आँखा रसाए । टंक दाइलाई बोलाउछु भनेर टंकलाई बोलाएपछी कोमल मनका टंक पनि रुन थाले । टंक र अशोकले रुदै गित गाएर सबैलाई रुवाए । गित गाइसकेपछी अशोकले स्टेजबाटै यस्तो भने कि सुन्दा सबैको मन छुनेछ ।
तलको भिडियोमा हेर्नुहोला मुटु छुनेछ मन रुनेछ